Ukutshata Ukuthengisa kweCopper & Advertising - APICMO
Umxholo we-CMO > Ukutshata Ukuthengisa kweCopper & Advertising
Ukugqweswa kwiSebe le-chemistry, iSyunivesithi yaseStford, iSebe leemakhemikhali kunye ne-chemistry, ngaphezu kweminyaka eyi-15 yamava kwintsimi ye-chemical synthesis synthesis, uye wakhonza i-Pfizer Inc, enoxanduva lokumaketha kweemarike zehlabathi kwaye mpu melelo.
I-1 icinge "ngoMtshato weShedyari yokuThengisa kunye nokuThengisa"
10 / 22 / 2019 kwi-1: 48 AM
Ngaba ibhlog yakho inephepha lokunxibelelana? Ndinengxaki yokuyifumana
kodwa, ndingathanda ukukudubula nge-imeyile. Ndineembono ezithile zebhlog yakho onomdla wokuziva.
Nokuba yeyiphi na, indawo entle kwaye ndijonge phambili ekuboneni
iyaphucuka ngokuhamba kwexesha.
egqithileyo ngeposi Previous: Zhaosen Zeng Ph.D. i-curriculum vitae
Okulandelayo elilandelayo: Alex Rodriges